မောင်မောင်စလုံး – အလွဲသုံးစားမှုများနဲ့ မြန်မာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ (အပိုင်း-၂)
မောင်မောင်စလုံး – အလွဲသုံးစားမှုများနဲ့မြန်မာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ (အပိုင်း-၂) (မိုးမခ) မတ် ၄၊ ၂၀၁၅ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကတော့ အဂတိလိုက်စားသူ ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများကို လုံးဝအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ အခွန်ငွေကောက်တဲ့ဥပဒေလည်း လုံးဝအသက်ဝင်လာခြင်းမရှိ၊ ဘတ်ဂျတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကိုလဲ လုံးဝ၊ စာရင်းစစ်တင်ပြ၊ အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တရုပ်ပြည်၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုးရီးယားတွေလို စနစ်တကျ စာရင်းစစ်အဖွဲ့နဲ့ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးလွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကို ကြီးမားတဲ့ ပါဝါ၊ သြဇာအာဏာ ပေးဖို့ကြိုးစားသူများလည်း ခေါင်းပုနေရပါတော့တယ်။ စာရင်းစစ် အကြီးအကဲ ဦးလွန်းမောင် နားပင်စင်ပေးခံရတာကိုလဲ အမိန့်မနာခံမှု၊ သာသနာဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့် အလုပ်ထုတ်၊ အရေးယူခံရတာလဲ အမိန့်မနာခံမှုနဲ့ တာဝန်ကအနားယူစေပါတယ်။ ဝန်ကြီးဦးဆန်းဆင့် အရေးယူခံရပြီး၊ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနရာထူးအရွှေ့အပြောင်းမှာ ဝန်ကြီး နှစ်ဦး၊ ပြန်ကြားရေးဝန် ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်...Read more »	ကိုသန်းလွင် – အဝေးပြေးလမ်းမ
ကိုသန်းလွင် - အဝေးပြေးလမ်းမ (စံတော်ချိန်သတင်းစာ၊ မိုးမခ) မတ် ၄၊ ၂၀၁၅ (၁) လွန်ခဲ့သောနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ကျွန်တော်တို့သည် ရန်ကုန် မန္တလေး အဝေးပြေးလမ်းမကြီး အတိုင်း မန္တလေးမှ ရန်ကုန်ဘက် သို့ဆင်းလာကြပါသည်။ မိတ္ထီလာအနီး သီးကုန်းစားသောက် ဆိုင်တန်း မှာ ထမင်းစား ပြီး တိုးဂိတ်ကိုဖြတ်ပြီးသော် ဆီထည့်ရန်ဓါတ်ဆီဆိုင်သို့ သွားရပါသည်။ ဒီဘက်ဓါတ်ဆီဆိုင်မှာ ဆီပြတ်နေပါသည်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့သည်ဟိုဘက်လမ်းကြောက ဆီဆိုင်သို့ သွားရန်လိုအပ်လာပါသည်။ မိတ္ထီလာ တိုးဂိတ် အနီးမှာ ဟိုဘက်သို့ကူးသောတံခါးရှိပါ၏။ သော့ကြီးခတ်ထားလေသည်၊ ဂိတ်မှ ဝန်ထမ်းကိုမေးသော် သူတို့မှာသော့မရှိ၊...Read more »	မောင်ဥက္ကလာ – ကြီးပွားရေး၊ ချစ်ဆရာမ၊ ကြီးမိုက်၊ သာသနာဖျက် နဲ့ အကြံသမား
မောင်ဥက္ကလာ – ကြီးပွားရေး၊ ချစ်ဆရာမ၊ ကြီးမိုက်၊ သာသနာဖျက် နဲ့ အကြံသမား ထွေထွေရာရာ ဤကမ္ဘာ (မတ် ၁၊ ၂၀၁၅) နှင်းဒုက္ခနဲ့ စီးပွားဖြစ်သူများ ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ ကြားမှာပေါ့။ အမေရိကန်အရှေ့ ဘက်ခြမ်းမှာနေတဲ့ ခိုလှုံနေတဲ့ မောင်ဥက္ကလာတို့ နေချင်းညချင်း မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း ရောက်သွားသလို ခံစားနေရတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ စံချိန်တင်တဲ့ နှင်းမုန်တိုင်း၊ အအေးဒဏ် ပြင်းထန်တဲ့ ဆောင်းရာသီလို့ ပြောနိုင်တယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့ ဘက်ခြမ်း နဲ့ အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာ နှင်းမုန်တိုင်းတွေ ရက်ဆက်နေပြီး။ မိုးလေဝသသတင်း တွက်ချက်ပြောဆိုမှုတွေတောင် တွက်မမှန်တဲ့...Read more »	Play Boy သန်းနိုင် ၏ တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့
Play Boy သန်းနိုင် ၏ တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) မတ် ၄၊ ၂၀၁၅ စတီရီယိုအဆိုတော်များထဲတွင် ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်သည် ဆိုသက်ရှည် ဝါရင့် အဆိုတော်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်ဟု ဆိုလျှင် မည်သူမျှ ငြင်းချက်မထုတ်နိုင်ပေ။သန်းနိုင်၏ သီချင်းများဖြင့် စတီရီယိုအဆိုတော်ဖြစ်လာကြသူများလည်း အများကြီးရှိပါသည်။ ပလေးဘွိုင်တီးဝိုင်းကို ထူထောင်ခဲ့သော ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင် သည်...Read more »	ရန်လင်းအောင် – သမိုင်းချင်း ယှဉ်ပစ်ရင် ဘယ်ငတေမှ မမာနိုင်ဘူး . . . . .
ရန်လင်းအောင် – သမိုင်းချင်း ယှဉ်ပစ်ရင် ဘယ်ငတေမှ မမာနိုင်ဘူး . . . . . (မိုးမခ) မတ် ၄၊ ၂၀၁၅ ရပ်ထဲရွာထဲ သူ့ပိုက်ဆံနဲ့သူသောက်တယ်ဆိုပေမယ့် မူးယစ်ရမ်းကားသူ အရက်သမားအတွက် လောကဥပဒေ ဓမ္မဥပဒေရှိသလို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ပြည့်သူ့အာဏာ မသဒ္ဓါရေစာ သောက်စားပြီး မိုက်ရိုင်းထွားကြိုင်း မူးယစ်ရမ်းကားသူ အာဏာရှင်လူတစ်စုတို့ရေ ....Read more »	ခက်ဦး – ရွှေပြည်တော်ဘွဲ့ ရွဲ့ချင်း
ခက်ဦး – ရွှေပြည်တော်ဘွဲ့ ရွဲ့ချင်း (မိုးမခ) မတ် ၄၊ ၂၀၁၅ အယောက်ရေ ၁၀၀၀ မပြည့်တဲ့ ပညာရေးမြင့်မားလိုမှုအတွက် အသက် နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆုံးအပ်ပြီးသား ခွပ်ရေးလှ ဒေါင်းပျိုတွေရှေ့မှာ လက်ညိုးညွှန်ရာ ရန်မူဖို့အသင့် ဝီိရိယပြည့်ပြည့် သိစိတ်ပျောက်သတ္တဝါ တပ်တော်မဟာကြီး ခွာတရှပ်ရှပ် နှာတမှုတ်မှုတ် ။ တောင်သူလယ်သမားနေ့တဲ့ ကြိုဆိုပစ်လိုက်ပုံက ၈၈...Read more »	ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – The RUN
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – The RUN (အကယ်ဒမစ်ဝိကလီးဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်ထုတ်) မတ် ၄၊ ၂၀၁၅ Like this:Like Loading...Read more »	မောင်မောင်စိုး – ကိုးကန့်ပြဿနာ – အပိုင်း (၂)
မောင်မောင်စိုး – ကိုးကန့်ပြဿနာ – အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) မတ်လ ၇၊ ၂၀၁၅ ● တပ်မတော်ရဲ့ online ပေါ်ကအောင်ပွဲ လောက်ကိုင်ဒေသတိုက်ပွဲစပြီးနောက် သမတရော ကာချုပ်ပါ အချုပ်အခြာအာဏာကာကွယ်ဖို့၊ အမိမြေ တလက်မမှ အဆုံး မခံဖို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီဝေါဟာရဟာ ပြည်ပကကျူးကျော်လာချိန်မှာ သုံးတဲ့စကားမှန်း အားလုံးသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့...Read more »	ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ၀တို့၏ မာယာ
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – ၀တို့၏ မာယာ (မိုးမခ) မတ် ၂၊ ၂၀၁၅ Like this:Like Loading...Read more »	ငြိမ်းချမ်းအေး – ရွှေဘကို ပြန်ကယ်ရမယ့်အချိန် ရောက်ပြီလား
ငြိမ်းချမ်းအေး – ရွှေဘကို ပြန်ကယ်ရမယ့်အချိန် ရောက်ပြီလား (မိုးမခ) မတ်လ ၂၊ ၂၀၁၅ ကျုပ်တို့ ရွာမှာက ရွှေဘနှိပ်စက်ခံရလေ၊ ရွှေဘကို ပရိသတ်က အားပေးလေပဲ။ သူကြီးသားနဲ့လက်ပါးစေများကို အော့ကြောလန်လေ ရွှေဘက လူချစ်ခံရလေပါပဲ။ “တုန်ခြင်း၊ မှုန်ခြင်း သည်းခံတယ်၊ ရွှေဘတော့ ပါပစေဟေ့၊ ရွှေဘမပါရင်တော့ သည်းမခံဘူး” ဆိုတဲ့ အနေအထားက ရှိလျက်ပါပဲ။...Read more »	ေ ဆာင်းလူ –ကျော့ ကွ င်း
ေ ဆာင်းလူ –ကျော့ ကွ င်း(မိုးမခ) မတ်လ ၂၊ ၂၀၁၅ မာယာများမယ်မကြံနဲ့ ဒါဟာ … ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကို စိန်တူးဖို့ ထွက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ခြေချင်းလိမ် တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ မျက်နှာမရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု အာသာပြေနည်းနဲ့...Read more »	ကျော်ဟုန်းရဲ့ အက်စစ်ပြင်းထဲက ရွှေ အမေရိကားနှင့် ကနေဒါသို့ ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ
ကျော်ဟုန်းရဲ့ အက်စစ်ပြင်းထဲက ရွှေ အမေရိကားနှင့် ကနေဒါသို့ ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ မိုးမခ ။ ။ မတ် ၂၊ ၂၀၁၅ ကဗျာဆရာ ကျော်ဟုန်းရဲ့ အက်စစ်ပြင်းထဲက ရွှေ ကဗျာစာအုပ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ကနေဒါ ဗန်ကူးဗားဘီစီတွင် မတ်လ ၁ ရက်နေ့ က စတင်ဖြန့် ချိလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ၂ နှစ်ကြာစီစဉ်လိုက်ရတဲ့...Read more »	ေ အာင်ဝေး– ဓား မနောက် ပိ တ်ခွေးများ ဖ တ် ဖို့စာ
ေ အာင်ဝေး– ဓား မနောက် ပိ တ်ခွေးများ ဖ တ် ဖို့စ...Read more »	ငြိမ်းချမ်းအေး – စနစ်ဆိုးရဲ့ ချိုးကို ခွာပါ
ငြိမ်းချမ်းအေး – စနစ်ဆိုးရဲ့ ချိုးကို ခွာပါ (သည်လေဒီးစ်နယူးစ် / မိုးမခ) မတ် ၀၂၊ ၂၀၁၅ မတ်လ (၂) ရက်နေ့ဟာ တိုင်းပြည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက် ရောက်ခဲ့ရခြင်း နှစ်ပတ်လည်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် မျိုးစေ့ချခြင်းကို ဆိုရှယ်လစ် အရေခြုံခဲ့သလို အာဏာသိမ်းရက်ကိုလည်း တောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြစ် ပုံဖျက်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၅၃) နှစ် ရှိပါပြီ။ ...Read more »	မောင်ဖေသက်နီ – အနုပညာသမိုင်းကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ဗန်ဂိုးနဲ့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ
မောင်ဖေသက်နီ – အနုပညာသမိုင်းကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ဗန်ဂိုးနဲ့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၊ ၂၀၁၅ ==================== (ဆောင်းပါးရှင် အလက်စတယ် ဆူကေး Alastair Sooke ဟာ အခုဆောင်းပါးကိုဘီဘီစီဝက်ဆိုဒ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုစာမျက်နှာမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ့က ရေးသားခဲ့ပြီး မောင်ဖေသက်နီ ဘာသာပြန်ဆိုပါတယ်) အခုဆောင်းပါးရေးသားသူ အလက်စတယ် ဆူကေး ...Read more »	မောင်မောင်စိုး – ကိုးကန့်ပြဿနာ – အပိုင်း (၁)
မောင်မောင်စိုး – ကိုးကန့်ပြဿနာ – အပိုင်း (၁) (မိုးမခ) မတ်လ ၁၊ ၂၀၁၅ • ကိုးကန့်ဒေသ တကယ်တော့ ကိုးကန့်ဒေသဟာ မြန်မာပြည်နယ်နိမိတ်ထဲကို ထိုစဉ် မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့ တရုတ် အစိုးရတို့ရဲ့ သဘောတူညီချက်ကအစပြုပါတယ်။ နောက်ပိုင်း တရုတ် မြန်မာနယ်နမိတ် တိုင်းထွာသဘောတူညီချက်တွေ အရလဲ မြန်မာပိုင်အဖြစ် အသိမှတ်ပြုထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့...Read more »	ကျော်မိုးလွင် – ကဗျာ၏ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုများ
ကျော်မိုးလွင် – ကဗျာ၏ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုများ (မိုးမခ) မတ်လ ၁၊ ၂၀၁၅ အလံလွှင့်သံတွေဟာ ကဗျာ …. အလင်းသစ်တွေ ပြန်ပွင့်လာတာ ကဗျာ …. ပစ်လိုက်တဲ့ မြှားတစ်စင်း သွေးစက်စက်နဲ့ အဆိတက်ခဲ့တာ ကဗျာ …. ခေါင်းလောင်းထိုး နံနက်ဝေလီဝေလင်း ဆောင်းအလယ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုအလှပဆုံး ကဗျာ …… စင်္ကြာဝဠာအစ ကမ္ဘာအစ...Read more »	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် – ထောင်တန်ထဲက ခေါင်းဆောင်ကြီး
ကာတွန်း လိုင်လုဏ် – ထောင်တန်ထဲက ခေါင်းဆောင်ကြီး မတ်လ ၁၊ ၂၀၁၅ Like this:Like Loading...Read more »	မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်) – အမှားခြေထောက်
မောင်ရဲနွေ (ပလိပ်) – အမှားခြေထောက် (မိုးမခ) မတ်လ ၁၊ ၂၀၁၅ မှားခဲ့ပြီးမှ ခွင့်လွှတ်ပါ စကားလုံး ရေလဲ သုံးတတ်ကြ …။ အခုလည်း မရိုးတဲ့ ရိုးရာပွဲမှာ အညစ်အကြေး အပြစ်အဆွေး အတာရေနဲ့ ဆေးကြတယ် …။ ပိတောက်ရေ ဒီလိုနဲ့ ပွဲပြီး မီးသေ အမှားတွေ မှားပြီးရင်း...Read more »	မတ်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၅ – မြန်မာလူမျိုးစု မြန်မာ့အသံ (ဆစ်ဒနီ)
မတ်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၅ – မြန်မာလူမျိုးစု မြန်မာ့အသံ (ဆစ်ဒနီ) ဆစ်ဒနီမြို့ မတ်လ ၇ ရက်မှာ ကျင်းပမယ့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ဖျော်ဖြေပွဲ ကြော်ငြာသီချင်းများ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ၊ ကြော်ငြာကဏ္ဍ ကိုးကန့်စစ်ပွဲနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင် အနေအထား – ဂါမဏိ၊ မိုးမခ ဆရာဦးတင်မိုး ကို်ယ်တိုင်ရွတ် “ဗုဒ္ဓနဲ့...Read more »	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – ဘင်္ဂလားဒေ့ဂ်ျနှင့် ရုရှားနုိုင်ငံတုို့မှ ရယူစရာ အစွန်းရောက်ဝါဒသင်ခန်းစာ
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – ဘင်္ဂလားဒေ့ဂ်ျနှင့် ရုရှားနုိုင်ငံတုို့မှ ရယူစရာ အစွန်းရောက်ဝါဒသင်ခန်းစာ (မိုးမခ) မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ (၁) အမေရိကန်နုိုင်ငံသား ဘင်္ဂလားဒေ့လူမျိုးဘလော်ဂါ အဝီဂျစ်ရွိင်း (Avijit Roy) ဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့က ဒါကာမြို့ လမ်းမပေါ်မှာ သဘောထားတင်းမာတဲ့ အစ္စလာမ်မစ်လူအုပ်စုရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တာ...Read more »	ငြိမ်းချမ်းအေး – ဒီမိုကရေစီနည်းကျ သရော်ပါ
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဒီမိုကရေစီနည်းကျ သရော်ပါ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ ဆရာ ညီပုလေး၏ ခေတ်ကိုထင်ဟပ်စေသည့် အဆင့်မြင့် သရုပ်ဖော် အနုပညာ ဒီမိုကရေစီကို ဈေးဖျက်ကြသူများ (၄) ဆရာညီပုလေး ရဲ့ ဝတ်စုံပြောင်း အာဏာရှင် သရုပ် ဖော်ထုတ်ပြပွဲ သရုပ်ဖော်ပုံ သိပ်ကောင်း၊ သိပ် အဆင့်အတန်း ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ...Read more »	ေ အာင်ဝေး– ငါ တို့ဆ က် ချီ တ က် မှ ဖြ စ် မ ယ်ကျော် ကို ကို
ေ အာင်ဝေး– ငါ တို့ဆ က် ချီ တ က် မှ ဖြ စ် မ ယ်ကျော် ကို ကို (မန္တလေးမှ လက်ပံတန်း၊ လက်ပံတန်းမှ...Read more »	မောင်ရစ် – ၂၀၁၃ ဘော်စတွန်အကြမ်းဖက်မှု အမေရိကန်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံ
မောင်ရစ် – ၂၀၁၃ ဘော်စတွန်အကြမ်းဖက်မှု အမေရိကန်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံ (အတွေးအမြင် မဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ ၂၀၁၅ ထုတ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့ ဘော်စတွန်မြို့ မာရသွန်ပွဲတော် ပန်းတိုင်အနီးမှာ ဗုံး ၂ လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်။...Read more »	ပျော်တော်ဆက် သာဂိ – အကောင်းမမြင်သမားရဲ့ ဆွမ်းတော်ခွက်
(မိုးမခ၏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း အစီအစဉ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က သရော်စာ) အကောင်းမမြင်သမားရဲ့ ဆွမ်းတော်ခွက် (ကိုဇာဂနာဖတ်ဖို့ ဟာသ) ပျော်တော်ဆက် သာဂိ။ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၉ ကိုဇာဂနာရေ … ခင်ဗျား မဖတ်ရမယ့် စာတွေ ရေးလိုက်ပြန်ပေါ့။ ခင်ဗျားဆီကို စာရေးတော့ ကျနော့်ကို မြစ်ကြီးနားမှာ နေတဲ့သူမှတ်ပြီး အဲသည်မှာ...Read more »	ကာတွန်း ATH – ဒါ ဒို့ နဂါးနီ
ကာတွန်း ATH – ဒါ ဒို့ နဂါးနီ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ Like this:Like Loading...Read more »	သတင်းထောက် အောင်နေမျိုးကို ရဲက ဖမ်း
အလွတ် ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုး(ဓာတ်ပုံ – ဂျေပုိုင်/ဧရာဝတီ) သတင်းထောက် အောင်နေမျိုးကို ရဲက ဖမ်း (ကျော်ခရေးတဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာန အွန်လိုင်းကနေ ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၅) လူမှု ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာ တပ်မတော်ကို သရော်ထားတဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်...Read more »	ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) – MY YANGON MY HOME ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာပွဲတော် မတ်လတလလုံး ကျင်းပပြုလုပ်မည်
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) – MY YANGON MY HOME ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာပွဲတော် မတ်လတလလုံး ကျင်းပပြုလုပ်မည် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၅ မတ်လ တလလုံးနီးပါး ကျင်းပပြုလုပ်မည့် MY YANGON MY HOME ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာပွဲတော် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်အကြောင်း သတင်းမီဒီယာ မိတ်ဆက်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း (အောက်)လမ်းရှိ ...Read more »	ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) – မိုးသူနှင့် မိုးသောက် ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိ
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) – မိုးသူနှင့် မိုးသောက် ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၅ စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ပန်းချီဆရာ ဦးမိုးသူ (ဘကြီးမိုး) သည် မြေးဖြစ်သူ မောင်မိုးသောက်နှင့်တွဲဖက်၍ ပန်းချီပြ ပွဲတခုကို ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၃၅ လမ်း အလယ်ဘလောက်ရှိ River Ayerawaddy ပန်းချီပြခန်းတွင်...Read more »	ပညာရေး၌ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး
ပညာရေး၌ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး (ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၅ ကြွလာကြတဲ့ ဧည့်ပရိတ်သတ်များခင်ဗျား … ကျွန်တော် ပြောမှာက ပညာရေး၌ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့ချရေး (Centralization Vs Decentralization) အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြကြလို့သာ ယခုပြောခွင့်ရတာ ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ ဒါမျိုးကို NNER...Read more »	Page 1 of 60212345...602»
မောင်မောင်စိုး - ကိုးကန့်ပြဿနာ - အပိုင်း (၂)	ငြိမ်းချမ်းအေး - ရွှေဘကို ပြန်ကယ်ရမယ့်အချိန် ရောက်ပြီလား	ကာတွန်း ဂျော်ဒီး - ၀တို့၏ မာယာ	မောင်မောင်စိုး - ကိုးကန့်ပြဿနာ - အပိုင်း (၁)	ေ အာင်ဝေး- ဓား မနောက် ပိ တ်ခွေးများ ဖ တ် ဖို့စာ	ရန်လင်းအောင် - သမိုင်းချင်း ယှဉ်ပစ်ရင် ဘယ်ငတေမှ မမာနိုင်ဘူး . . . . .	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ငြိမ်းချမ်းအေး - စနစ်ဆိုးရဲ့ ချိုးကို ခွာပါ	ခက်ဦး - ရွှေပြည်တော်ဘွဲ့ ရွဲ့ချင်း	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - ဘင်္ဂလားဒေ့ဂ်ျနှင့် ရုရှားနုိုင်ငံတုို့မှ ရယူစရာ အစွန်းရောက်ဝါဒသင်ခန်းစာ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများရေးခဲ့မိသော မှတ်တမ်းများ - အပိုင်း (၉)
အရှင်ကုသလသာမိ (အတည်မဲ့) - စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပုိုင်း ၈)
စာပဒေသာ ကောက်စာများBeyond Generation Zero - Thit Kaung Eain
ဇေမှိုင်း - ရေနှောက်သွားတဲ့ သက္ကရာဇ်တွေ
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Join 1,291 other subscribers
မိုးမခမျက်နှာ Western Union စာအုပ်မြင် ချစ်ခင်ကြပါစေ …	MoeMaKa Monthly ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် ထွက်ပြန်ဘီ တဲ့ ...
Radio Program (83)
Maung Swan Yi (46)
Han Thit Naing (71)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (167)
ကာတွန်း – အောင်မော် (55)
ကာတွန်း ATH (49)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (215)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (144)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (583)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (197)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (133)
Cartoon Box (1,441)
Twitter: moemakaသစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း – ၅) http://t.co/WfcC6KaSN1 08:57:54 PM February 04, 2015 ReplyRetweetFavoriteရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) – EUSHIDO & INSIN ၏ နယူးရီးယား ကံစမ်းမဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပပြုလုပ် http://t.co/SFa0XjeVWS 08:56:03 PM February 04, 2015 ReplyRetweetFavoriteရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) ဆင်မြီးဆွဲမြို့တွင် ပထမအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် http://t.co/o37S8QMrCn 08:43:51 PM February 04, 2015 ReplyRetweetFavoriteမေရီလန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ပြည့် ကျင်းပမည် http://t.co/XtQf6A1fvU 01:11:17 PM February 04, 2015 ReplyRetweetFavoriteတူမောင်ညို – သူရနဲ့ သူရဦးအောင်ကို ပျော့ပျောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ http://t.co/grg7Aqx3mu 01:02:32 PM February 04, 2015 ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent Commentscatwoman on မောင်ဖေသက်နီ – အနုပညာသမိုင်းကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ဗန်ဂိုးနဲ့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်များhtwepaing onအောင်ဝေး– ဓား မနောက် ပိ တ်ခွေးများ ဖ တ် ဖို့စာDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများHsu Zin on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများKyaw Mya Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ